क्रिश्चियन धर्मालम्बी भन्दै एकनाथ ढकालकै धन्दामा यी पास्टरहरु !
छायाचन्द्र भण्डारी, काठमाडौं । नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाएपछि क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुको हाली मुहाली निकै बढेको छ ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाललाई विदेशी शक्तिको इसारामा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको आरोप लगाउँदै गर्दा र सरकार पनि क्रिश्चियन धर्म प्रति सरल देखिनु काग कराउनु र बाख्रा हराउनु जस्तै मानिएको छ ।
मुलुकको गरिबी र अशिक्षामा टेकेर क्रिश्चियन धर्म प्रचारकहरुले भित्रभित्रै उधुम मच्चाइरहेकाछन् । त्यसो त राजधानी काठमाडौंमा आयोजित "एशिया प्यासिफिक समिट"को मुख्य आयोजक संस्थालाई लिएर विभिन्न खाले टिकाटिप्पणीहरू भयो ।
सो कार्यक्रमको भित्रि 'मक्सद' धर्म प्रचारनै थियो । खुलेआम धर्म प्रचारको वकालत गर्दै आएका एकनाथ ढकालजस्तै भित्रभित्रै विदेशी डलरमा उत्पात मच्चाउने गिरोहको संख्या मुलुक भित्र र बाहिर हजारौं रहेको छ । जुन संख्याका बारेमा सरकार बेखबर जस्तै छ । समाज कल्याण परिसरमा दर्ता भएका क्रिश्चियन समुदायको भित्रि 'मक्सद' धर्म प्रचार नै हो ।
"एशिया प्यासिफिक समिट"का नाममा धर्म प्रचारको कार्यक्रममा सहभागी बनेको भन्दै धेरैले सरकारलाई निशाना बनाए । सरकारलाई निकै ठुलो झड्का लाग्यो । मुलुकको सबै भन्दा ठुलो दल नेकपामा अझै पनि खैलाबैला मच्चिएको छ ।
बैठकले पार पाउन सकेको छैन् । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै कतिपय नेताहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमा कडा प्रश्न राखे ।
नेकपाका नेता भीम रावलले ट्विट गर्दै कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।
उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु पर्‍यो। शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले यत्रो पैसा कति कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नुपर्छ। नभने सरकारले खोजेर भन्नु पर्छ।
यसरी चल्छ धर्मको आडमा धन्दा !
धर्मको आडमा बालबच्चा, अपाङ्ग, अशक्त र बृद्धवृद्धाका नाममा विदेशबाट डलर भित्राएर धर्मकै आडमा क्रिश्चियनका अगुवाहरुले लुट मच्चाउने क्रम रोकिएको छैन् ।
साना साना नानीहरुलाई पठनपाठन गराउने भन्दै ललितपुरको भैसेपाटीमा रहेको आइएन नेटवर्ककी प्रमुख लक्ष्मी थापा (एस्तर) ले ठुलो रकम हिनामिना गरेको खबर त्यसै सेलायो ।
एउटा बच्चाका नाममा मासिक सय डलर भित्रिने सो संस्थामा एक विद्यार्थी बराबर रु १२ सय मात्र दिएर अन्य रकम अन्य रकम ब्यक्तीगत शुभलाममा प्रयोग हुने गरेको त्यही कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । सोही संस्थामा सामुयलले पनि लुट मच्चाएका थिए ।
असाहय विद्यार्थीलाई दिइने सहयोगबाट प्रतिमहिना थापाले लाखौं रुपियाँ अनियमिता गर्ने गरेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
त्यसैगरि धर्मलाई नै ब्यापक दुरुपयोग गर्दै व्यक्ति मोटाउने काम गरेको सो धर्मका अनुयायीहरु नै बताउदै आएका छन । त्यसै गरि डलर भित्राएर लुट मच्चाउनेमा गोर्खा जिल्लाबासी रमेश सापकोटा पनि अग्रणी सुचीमा रहेकाछन् ।
धापाखेलमा अस्भाविक तरिकाले महल ठड्याएका सापकोटाले यशुख्रीष्टको सु समाचार प्रचार गर्ने भन्दै विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम गरेको भीडीयो बिक्री गर्दै व्यक्तिगत सम्पति जोड्ने गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसो त राम्रै महलको व्यवस्था गरेका टेकबहादुर दाहालको सम्पतिकै कारण श्रीमान र श्रीमतीमा खटपट भएको थियो । विभिन्न कार्यक्रममा महंगा गायकलाई झुक्याउदै फसाउदै गर्ने यी दाहालले डोनरहरुलाई नेपाल गरिब मुलुक भएकाले पैसाको ठुलो आवश्यकता भएको बताउदै भित्राइएको डलरमा एकछत्र राज गर्दै आएकाछन् ।
त्यसै गरि सुन्दर थापा ,जिवन लामा, इसुजंग कार्की, एलिया प्रधान, सोनाम टिकागो, तारा सिहं कठायत, ओमप्रकाश सुब्बा, प्रकाश सोदेम्बा, मिनिकुमार राई, फिलिप गजमेर, लोक भण्डारी, धन तामाङ, महेश्वर राई, माइकल रायमाझि (क्षेत्री), राजु सुन्दास, नारायण शर्मा, लोकमणी ढकाल लगायतले धर्मको नाममा अवैध तरिकाले सम्पति जोड्ने गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । गोर्खा निवासी पास्टर कृष्ण परियारले ललितपुरमा एक क्रिश्चियन सेन्टर चलाएकाछन् । सो संस्थाको आय-व्यय समेत गोप्य रहेको छ ।
त्यस्तै ,थापा र उनका आफन्तका नाममा जोडिएको जग्गा पनि खोजी हुनुपर्छ एक पास्टरले भने । धर्मको आडमा लुट धन्दा मच्चाउनेहरुको सम्पती राज्यले छानबिन गर्न जरुरी छ । धर्मको आडमा असाहय र असक्तलाई सहायता भन्दै यस्तो लुट सुन्दर थापाको सम्पती थाहा पाउने जो कोहीले जिब्रो टोक्छ स्रोत भन्छ । कृष्ण परियार, जितबहादुर भित्राकोटी (जेवी भिर्लाकोटी )को धन्दा पनि डर लाग्दो रुपमा चर्किएको छ ।
जेवी भित्राकोटीले बच्चाको नाममा विदेशबाट डलर भित्राएर घर बनाए । तर बच्चाहरुलाई बिस्तारै पन्छाउदै गए एक पास्टरले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा न्यूज अभियानलाई भने ।
नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुनु भन्दा लामो समय अगाडि देखि क्रिश्चियन समुदायको सहभागिता देखिएपनि अहिले आएर धर्मका नाममा विदेशबाट ठुलो रकम भित्राएर क्रिश्चियनका केही पास्टरहरु मोटाउने काम भइरहेको छ ।
कतिपयले क्रिश्चियन धर्मलाई नै आड भरोसा गराएर विदेश तिर भासिएकाछन् । यसरी खुलेआम लुटधन्दा फस्टाउदाँ सरोकारवाला निकायहरु किन मौन बसेको हो ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । नेपालीमा क्रिश्चियन धर्मको सु-समाचार प्रचार गर्ने भन्दै भित्राइएको अवैध रकम आफु र आफ्नो पारिवारिक मोजमस्तीमा दुरुपयोग गर्ने प्रवृति मौलाएको छ ।
अशिक्षा र गरिबीलाई फाईदा उठाउदै क्रिश्चियन समुदायका केही व्यक्तिले विदेशबाट रकम भित्राउने र आफु करोडपति बन्ने होडबाजीले इमान्दार र राष्टप्रेमी क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरु तनावमा परेकाछन् ।
पछिल्लो समय नेपालको गतिविधिलाई बाहिरी मुलुकमा नकारात्मक सन्देश दिदै धर्म प्रचारका नाममा थापा, परियार, लामा, प्रधान, टिकागो, कठायत, सुन्दास लगायत केही व्यक्तिहरुले आफु र आफ्ना नातेदारहरुका नाममा अवैध रकम जोड्न रस्साकस्सी मच्चाएका छन् ।
उता आँफुलाई कहिले दार्जिलिङ निवासी त कहिले तिब्बटियन बताउदै आएका लामाले अन्तत चितवनबाट नागरिकता लिएपनि उनीलाई कार्वाही भएन । नागरिकता विवादलाई ललितपुर प्रहरीले अनुुसन्धान गर्ने क्रममै मुद्दा अल्मलाइदिएपछि लामाको बारे थप शंका बढेको हो ।
त्यस्तै अवैध रकम जोड्नेको लर्कोमा नेपाल क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइष्ट र जिसीडिसीका डाईरेक्टर तारासिहं कठायत पनि अग्रपंक्तिमै छन् ।
कतिपय पास्टरहरुले महिला कर्मचारीसँग अनैतिक सम्बन्ध राख्न खोज्ने अनुकुल नभए जागिरबाट हटाउने सम्मका क्रियाकलाप उत्तिकै बढेको छ ।
स्वदेशमा र विदेशमा दुबै थरि (नक्कली सक्कली) अडिट गरेर अवैधानिक तरिकाले रकम जोड्ने उनी जस्तैको संख्या भने कम छैन् । उनी जस्तै यो समुदायका सयौ व्यक्ति माथि समयमै सरकारको सम्बन्धित निकायले लेखाजोखा गर्नेु आवश्यक छ ।
जागिर खान क्रिश्चियन भन्दै यस्तो विज्ञापन
मानिसको धर्म जन्मिँदै तोकिएको हुदैँन । जन्मिँदै लिएर पनि आएको हुँदैन। जन्मेर हुर्किदै जादाँ धर्म अपनाउन पाउने अधिकार नेपाल राष्ट्रको संविधानले दिएको छ ।
तर, नेपालमा पछिल्लो समय यस्ता–यस्ता विकृति मौलाए कि जसलाई हेर्दा पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिको मूलथलो, तपोभूमि भन्ने अवस्थामा असहज हुन थालेको छ ।
केहि हप्ता अघि मात्रै एउटा यस्तै उदाहरण देखा पर्यो। टिच नेपाल नामक एउटा गैरसरकारी संस्थाले जागिर खुलायो। तर, उक्त संस्थाले तोकेको मापदण्ड चाहिँ निकै गम्भीर देखियो ।
प्रचारको शैलीले मुलुकको संबिधाननै धज्जी उडाएको थियो ।
उक्त गैरसरकारीमा शिक्षकको जागिर खानका लागि क्रिश्चियन परिवारमै जन्मिएको हुनुपर्ने छ।
अनि क्रिश्चियन शिक्षामै स्नातह तह पास गरको हुनुपर्ने छ। त्यति मात्रै होइन, चर्चको प्रमाणीकरणको पत्र पनि साथमा हुनुपर्ने जिकिर उक्त विज्ञापनमा गरिएको छ।
प्री एसिस्टेन्ट टिचर ट्रेनरका लागि खुलाइएको विज्ञापनका विषयमा सामाजिक सञ्चालमा लज्जा र आपत्ति प्रकट भयो ।
खुलेआम क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुको दादागीरी मच्चिए पनि राज्य कानमा तेल हाले र बसेको छ ।